तराई टुक्र्याउने सिके राउतको डरलाग्दो प्रदाफास : मधेश राज्यको छुट्टै झण्डा, २ मिनेट १५ सेकेन्डको राष्ट्रिय गानसमेत, हेर्नुहोस – TAJA KHAWAR
तराई टुक्र्याउने सिके राउतको डरलाग्दो प्रदाफास : मधेश राज्यको छुट्टै झण्डा, २ मिनेट १५ सेकेन्डको राष्ट्रिय गानसमेत, हेर्नुहोस
November 28, 2018 Taja Khawar समाचार 0
काठमाडौं । राज्यविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा रौतहट कारागारमा रहेका सिके रावतलाई थुनामै पठाउने या रिहा गर्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्नुअघि यस प्रकरणको पेनड्राइभ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । के छ त्यसमा ? कौतुहलतको विषय बन्ने नै भयो ।
पाठकवृन्द, उक्त पेनड्राइभमा रहेको महत्वपूर्ण दस्ताबेज जनआस्थाले फेला पारको छ । नौ वटा फोल्डर रहेको पेनड्राइभमा ४ वटा भिडियो छन् भने ५ वटा तस्बिर समावेश छ । जहाँ मधेस स्वराज संक्षिप्त रोडम्याप शीर्षकमा तीनवटा भिडियो छन् । पहिलो ५ मिनेट ३३ सेकेन्ड, दोस्रो भाग ३८ मिनेट १२ सेकेन्ड लामो र तेस्रो भाग १ घण्टा ३० मिनेट ४२ सेकेन्डको छ । उनले अगग्गै मधेश राज्यको छुट्टै झण्डा र २ मिनेट १५ सेकेन्ड लामो राष्ट्रिय गानसमेत तयार पारेको प्रमाण त्यसैमा छ ।
उनको भिडियो अभिव्यक्ति मधेसी जनतालाई केन्द्रीय सरकारमाथि जाइलाग्न भड्काउने प्रकारको छ ।
भिडियोको सुरुमै राउतले सुनेको कुरा खुला दिमागले सोच्न आग्रह गरेको छन् । आफ्ना अभिव्यक्तिलाई अमृतवचन भन्दै उनले त्यो सुन्नेले दिमागमा जमेको पुरानो विचारको संज्ञा दिइएको छ । जसलाई फोहोर फालेर राख्नको लागि ढक्कन खोल्न आग्रह गरिएको छ । भनेका छन् ‘हाम्रो हात नेपाली फिरंगीले बाँधिदिएको छ । तसर्थ आजादी ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला हात खोल्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय सरकारले मधेसका जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्जजस्ता नाकाबाट राजस्व उठाउने तर त्यो राजस्व हामीलाई नदिने ? राजस्व उठाउने हामी प्रयोग गर्ने नेपालीले ?’ नेपालीले मधेसको मालपोत, साधन स्रोत, जंगल सबै लिएर गइरहेको तर मधेसीले प्रयोग गर्न नपाइृको भिडियोमा सुन्न पाइन्छ । उनले मधेश स्वतन्त्र बनाउन फिरंगी सेनालाई मधेसबाट फिर्ता गराउनुपर्ने समेत बताएका छन् । भनेका छन् ‘९५ प्रतिशत सेना मधेसबाहिरबाट आएका फिरंगी हुन् । जबसम्म तिनलाई फर्काएर मधेसीलाई नै सेना बनाउन सकिन्न तबसम्म जतिसुकै नयाँ संविधानको कुनै मतलव हुँदैन ।’ आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट ।
तलको भिडियो सान्दर्भिक लागे हेर्नुहोला !
दुधमा मिलाएर खानुहोस् यो वनस्पति , ७० वर्षसम्म पनि देखिनुहुनेछ तपाई जवान
April 20, 2019 Taja Khawar 0
काठमाडौ । हामीले नियमित एक गिलास दुधमा पियौ भने धेरै रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । किनभने दुधमा हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने क्याल्सियमको मात्रा हुन्छ । त्यसैले […Read More]
एम बि गुरुङको उत्कृष्ट अभिनय मा चोट सार्बजनिक
April 19, 2019 Taja Khawar 0
बैशाख ६ काठमाडौ नेपालि लोक तथा सुगम संगीत क्षेत्रमा मोडलिङ बिधा बाट आफ्नो परिचय स्थापित गराउन तल्लीन बिगत केही बर्ष अगाडि देखि निरन्तर नेपाली सांगीतिक […Read More]
नयाँ बर्षको शुभकामना सहित कृष्ण पौडेलको बाजाको तालमा // भिडियो सहित
April 13, 2019 Taja Khawar 0
सुजन बिश्वकर्मा भावुक चैत ३० काठमाडौ विकसित डिजिटल प्रबिधिको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण तिव्र गतिमा फराकिलो बनिरहेको नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन विभिन्न बिधाका गीत संगितसँगै नव […Read More]
हेर्नुभयो ? यस्तो छ प्रकाश सपुतको ब्याटल २
April 6, 2019 Taja Khawar 0
काठमाडौं । गायक प्रकाश सपूतले दोहोरी ब्याटल–२ लिएर आएका छन् । दोहोरी ब्याटलबाट सफलता पाएपछि उनी ब्याटल–२ लिएर आएका हुन् । शब्द तथा संगीत पनि […Read More]
लालुमै र लाउँछ माया पछि सर्जक हमालको उत्कृष्ट सिर्जनामा अधुरो पिरती
किस्ना आचार्य रोशनी चैत २३ काठमाडौ नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा बिगत करिब दुई दशकदेखी निरन्तर सकृय रहदै आएका लोकप्रिय सर्जक तथा गायक हुन शिव हमाल । […Read More]
नमस्ते नेपाल र ज्ञानभुमि हाइटद्वारा बाराका हुरी पीडितलाई राहत सहयोग वितरण
April 5, 2019 Taja Khawar 0
चैत २२ गते बाबुराम सिग्देल, काठमाडौँ । बारामा हावाहुरीको आतंकबाट प्रभावित भएका पीडितहरुलाई नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था र ज्ञानभुमि हाइट सुधार समितिले संयुक्त रुपमा […Read More]
कृष्ण सापकोटा किन बने यसरी पागल // भिडियो सहित
April 2, 2019 Taja Khawar 0
नेपाली लोकसांगीतिक क्षेत्रमा बिगतका बर्षहरु देखि नै सक्रिय रहदै आएका सर्जक तथा मोडल कृष्ण सापकोटा को उत्कृष्ट शब्द सिर्जना र अभिनय मा भर्खरै मात्र नयाँ […Read More]
यसैबर्ष मात्रै सापकोटालाई एक संमान ३ अवार्ड
किस्ना आचार्य रोशनी चैत १९ काठमाडौ “नाट्यश्वर हामी सबै कलाकारको सान , कला र कलाकारीताको जगेर्ना हाम्रो अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरिएको नाट्यश्वर […Read More]
गणतन्त्र नेपालका प्रथम रास्ट्रपति रामबरण यादवको प्रमुख आतिथ्यमा नाट्यस्वर म्युजिक अवार्ड सम्पन्न
April 1, 2019 Taja Khawar 0
चैत्र १८ । नाट्यश्वर म्यूजिक अवार्डमा नेपाली चलचित्र, सङ्गीत तथा रङ्गपत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति […Read More]
नाट्यस्वर म्युजिक अवार्ड २०७५ मा बबिता श्रेष्ठलाई सर्बोकृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशकको अवार्ड
चैत १८ काठमाडौ “नाट्यश्वर हामी सबै कलाकारको सान , कला र कलाकारीताको जगेर्ना हाम्रो अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरिएको नाट्यश्वर म्युजिक अवार्ड कार्यक्रम […Read More]
भोट गर्नु भयो? यस्ता प्रश्न सोधिएको रहेछ शृङ्खला खतिवडालाइ, दिइन यस्तो जवाफ हेर्नुहोस
बेपत्ता बालकको शव भेटियो, अपहरणकारिले ७ बर्से बालकको ज्यान लिए